निर्वाचित भएर सपथ पनि खाएका थिएनन् बाइडेनले, उनकी श्रीमती निला र छोरीको कार दुर्घटनामा मृ त्यु हुँदा दुई छोरा बाँचे ! – Khabaarpati
November 8, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on निर्वाचित भएर सपथ पनि खाएका थिएनन् बाइडेनले, उनकी श्रीमती निला र छोरीको कार दुर्घटनामा मृ त्यु हुँदा दुई छोरा बाँचे !
काठमाडौँ- अमेरिकाको ४६औँ राष्ट्रपति चुनिएका जो बाइडेनले पहिलो विजयी सम्बोधन गर्दै सहकार्य र एकताको आह्वान गरेका छन् । देशवासीका नाममा आइतबार पहिलो सम्बोधन गर्दै जो बाइडेनले अमेरिकी नागरिकले आफूलाई इतिहासमै सबैभन्दा बढी भोट दिएर जिताएकोमा सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्ने बताए । ‘अमेरिकाका जनताले स्पष्ट जनादेश दिएका छन्। यो जित तपाईंहरूको हो। मैले ७.४ करोड भोट प्राप्त गरेको छु। यति भोट अहिलेसम्म कसैले (अमेरिकाको इतिहासमा) पाएका थिएनन्।’
सम्बोधनका क्रममा बाइडेनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विपक्षी भए पनि शत्रु नभएको उल्लेख गरे । ‘हामी विपक्षी हुन सक्छौँ, शुत्र कदापी होइनौँ । अब ‘राक्षसीकरण’ गर्ने समयको अन्त्य गरिनु पर्ने पनि उनले बताए।उनले मतभेदलाई पाखा लगाएर जनताको सेवाका लागि सहकार्य गर्नु पर्ने बेला आएको र त्यसको सन्देश चुनाव मार्फत अमेरिकीले दिएको भन्दै सिनेट तथा हाउसमा रहेका रिपब्लिकनहरुलाई सहकार्यका लागि अपिल गरे।
‘म अब अमेरिकालाई कुनै रातो त कुनै नीलो राज्यका रूपमा रहन दिन्नँ। म अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँ, कुनै पार्टीको होइन। म सबैसँग मिलेर काम गर्छु। म यस मुलुकको मेरुदण्डलाई फेरि उठाउँछु।’ जो बाइडेनले पेन्सिलभेनिया तथा नेभाडको नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेसँगै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि चाहिने २७० इलेक्टोरल कलेज मतको आँकडा पारे गरेपछि उनी अमेरिकाको ४६औँ राष्ट्रपति चुनिएका छन्।
बाइडनको वाशिङ्टनसँगको नाता ४७ वर्षअघि सन् १९७३ मा जोडिएको थियो जब उनी अमेरिकी सिनेटका सदस्य बनेका थिए।अनि उनको पहिलो राष्ट्रपतीय प्रचार अभियान ३३ वर्षअघि सन् १९८७ मा भएको थियो।उनी मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने स्वाभाविक नेता हुनुका साथै कुनै पनि बेला गलत वाक्य बोल्न सक्ने नराम्रो गुण भएका मानिस पनि हुन्।
भिडका सामुन्ने बोल्दाबोल्दै चिप्लिँदा उनको पहिलो प्रचार अभियान सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै खेर गएको थियो। एउटा र्‍यालीमा भाषण गर्दै उनले भनेका थिए: “मेरा पुर्खा उत्तरपूर्वी पेन्सिल्भेनियाका कोइलाखानीमा काम गर्थे।”उनीहरूले जीवनमा अवसर नपाएकोमा आफू क्रोधित भएको उनले बताएका थिए।
तर वास्तवमा उनका पुर्खा कोही पनि कोइलाखानीमा कामदार थिएनन् – उनले त्यो वाक्य (र अन्य कैयौँ वाक्य) एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ निल किनकको भाषणबाट चोरेका थिए।पछि ‘जो बम’का नामले परिचित बन्न पुगेका यस्ता विभिन्न गल्तीको शृङ्खलाको त्यो पहिलो कडी थियो।सन् २०१२ मा आफ्नो राजनीतिक अनुभवबारे बखान गर्दै उनले आफ्नो भाषणमा भने, “मैले आठ जना राष्ट्रपतिलाई चिनेको छु, तीन जनालाई त अत्यन्त निकट रूपमा।”विचार नगरी उनले भनेको कुरालाई निकट मित्रता मात्र नभई यौ न सम्बन्ध रहेको रूपमा समेत अर्थ्याउन सकिन्थ्यो।
सिनेटरका रूपमा बाइडेनको भाषण गर्ने कलाको खुबै तारिफ हुन्थ्यो। उनको फरसाइलो व्यक्तित्व, सबैसँग घुल्न सक्ने क्षमता र वाककला हेरेरै धेरैले उनलाई सुरूदेखि नै राष्ट्रपतिका लागि योग्य ‘मटेरियल’ भनेका थिए। मिडियाले भने उनको त्यही क्षमतामाथि प्रश्न उठायो। भाषण गर्ने शैली र कतिपय विषयवस्तु अरूबाट ‘चोरेको’ आरोप लाग्यो। यहाँसम्म कि, उनी कमजोर विद्यार्थी रहेको र विश्वविद्यालयको थेसिससमेत चोरी गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। राष्ट्रपति ओबामाको उपराष्ट्रपतिको रूपमा सन् २००९ मा उनले ‘अर्थतन्त्रमा हामीले हानि पुर्‍याउने ३० प्रतिशत सम्भावना छ’ भनेर मानिसहरूलाई त्रसित बनाइदिए।उनले ओबामालाई वर्णन गर्दै यसो भनेका थिए “अफ्रिकी-अमेरिकी समुदायका पहिलो व्यक्ति जो प्रखर वक्ता छ, तीक्ष्ण र स्वच्छ अनि आकर्षक छ।” तापनि भाग्य नै भन्नुपर्छ अमेरिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपतिले उनलाई उपराष्ट्रपतिमा चुने।
गत वर्ष बाइडनले आफूहरूलाई अनुचित रूपमा स्पर्श गरेको, अँगालो हालेको वा चुम्बन गरेको भन्दै आठ महिलाले आरोप लगाएका थिए।अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले बाइडनले कसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित महिलाहरूसँग निकट भावमा व्यवहार गर्छन् र कसरी उनीहरूको केश सुँघेको जस्तो गर्छन् भनेर पनि चित्रण गरे।
प्रतिक्रियामा बाइडनले आगामी दिनमा आफ्नो व्यवहारलाई लिएर होस पुर्‍याउने बताए।तर मार्च महिनामा तारा रिड नामक महिलाले ३० वर्षअघि आफूलाई बाइडनले यौ न आ क्रमण गरेको आरोप लगाइन्। त्यतिखेर उनी बाइडनको कार्यालयमा सहयोगी कर्मचारी थिइन्। बाइडनले सो आरोप अस्वीकार गरे र उनको प्रचार कार्यालयले त्यस्तो हुँदै नभएको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो।सामान्य मानिससँग निकटता देखाउने उनको आत्मीय शैलीका कारण बाइडनले राम्रो गर्ने उनका समर्थकको आशा छ।वाशिङ्टनमा उनको धेरै अनुभव छ। सिनेटमा तीन दशकभन्दा धेरै अनि ओबामाको उपराष्ट्रपतिको रूपमा आठ वर्ष। करिब ५० वर्षदेखि उनी उच्चस्तरको राजनीतिमा संलग्न भइआएका छन्।
अमेरिकाका हरेक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा बाइडन या त संलग्न छन् या त त्यसबारे केही टिप्पणी गरेका छन्।सन् १९७० मा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा जातीय एकता कायम गराउन बालबालिकालाई अन्य इलाकामा बसबाट पुर्‍याउन भनी गरिएको निर्णयको विरोध गरिरहेका दक्षिणी क्षेत्रका समूहको समर्थनमा बाइडन उभिएका थिए। यो विषयलाई पटकपटक उनको विरुद्धमा प्रयोग गरिएको छ। ओबामाको कार्यकालमा रक्षामन्त्री रहेका रोबर्ट गेट्सले विदेशनीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित लगभग प्रत्येक महत्त्वपूर्ण निर्णयमा बाइडन गलत ठहरिएको तर पनि उनलाई नरुचाउन भने नसकिने बताएका थिए।
उनी उपराष्ट्रपति रहेकै बेला बाइडेनका जेठा छोरा बो बाइडेनको ४६ वर्षकै उमेरमा क्यान्सरका कारण मृत्यु भयो। बोलाई धेरैले बाइडेनको राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा हेरेका थिए। बाइडेन पनि उनीसँग धेरै नजिक थिए। बोको मृत्यु बाइडेनको जीवनमा दोस्रो ठूलो वियोगान्त घटना थियो।सन् १९७२ मा बाइडेन भर्खरै सिनेटर निर्वाचित भएका थिए। सपथ पनि खाएका थिएनन्। उनकी श्रीमती निला र छोरी नाओमीको कार दुर्घटनामा मृत्यु भयो। सोही दुर्घटनामा परेका दुई छोरा भने बाँचे। जिल बाइडेनकी दोस्री पत्नी हुन्। छोराको वियोग र हिलारीजस्ती बलियी प्रतिस्पर्धीका कारण बाइडेनले सन् २०१६ मा राष्ट्रपतिका लागि डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गरेनन्। त्यो बेला ७३ वर्ष पुगेका बाइडेनको राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना सदाका लागि सकिएको मानिएको थियो।
आफ्नो परिवारका त्यति धेरै सदस्य गुमाएका बाइडनप्रति सर्वसाधारण अमेरिकीमा सहानुभूति छ। तर उनका अर्का छोरा हन्टरसँग भने अर्कै कथा जोडिन्छ। हन्टर पहिले वकिल थिए। पछि उनको व्यक्तिगत जीवन समस्याग्रस्त भयो। उनको पहिलो पत्नीले उनले ला गुऔ षध तथा मदिरा प्रयोग गर्ने गरेको अनि मो जम स्तीमा लागेको विषयलाई सम्बन्धविच्छेदको कारणको रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। को किन प्रयोग गरेको पाइएका कारण उनी अमेरीकी जलसेनाबाट निष्काशनमा परेका थिए।
उनले द न्यूयोर्कर पत्रिकासँगको कुराकानीमा आफूलाई ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक ठूला चिनियाँ व्यापारीले हीरा दिएको स्वीकारेका थिए। ती व्यापारीलाई पछि बेइजिङले भ्रष्टाचारमा छानबिन गरेको थियो।गत वर्ष हन्टरले भेटेको एक सातापश्चात् नै दोस्रो पत्नीसँग बिहे गरेका थिए। उनको व्यक्तिगत जीवन र आम्दानीको विषयले बाइडनपनि विवादमा तानिएका छन्। उनले गरेको आम्दानीको एउटा क्षेत्रचाहिँ यूक्रेन थियो।त्यसलाई लिएर राष्ट्रपति ट्रम्पले यूक्रेनका राष्ट्रपतिलाई हन्टरमाथि भ्रस्टाचारको अनुसन्धान गर्न दबाव दिएको भन्ने आरोप लाग्यो।
रिया चक्रवर्तीलाई यस्ता सर्त राखेर छोडियो, उनका भाई अझै हिरासतमै